FAQ – Similac
ကျွန်ုပ်၏ ဖော်မြူလာရွေးချယ်မှုသည် ဘာကြောင့်အရေးကြီးပါသလဲ?
ကလေးတစ်ယောက်ကြီးထွားသည့်နှစ်များသည် ၎င်း၏အခြားအချိန်များထက် လျင်မြန်စွာ ကြီးထွားမှုကိုဖြစ်စေသည်။ ထိုနှစ်များတွင် သင့်ကလေးကိုကျွေးမွေးသည့်အရာများသည် အရိုးဖွံ့ဖြိုးမှုအပါအဝင် အခြားဖွံ့ဖြိုးမှုများကို ပါထောက်ပံ့ပေးသည့်အရာများ ပါဝင်အောင်ကျွေးမွေးသင့်သည်။ သင့်ကလေးသည် ကယ်လ်စီယမ် နှင့် ဗီတာမင် ဒီ စသည့် သင့်လျော်သော အာဟာရဓာတ်ပမာဏများ ရရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ Plam olein Oil ပါဝင်သောဖြည့်စွက်အာဟာရဖော်မြူလာများသည် ကယ်လ်စီယမ် စုပ်ယူမှုကို လျော့ကျစေကြောင်း ပြသခဲ့ပါသည်။ Similac Gain IQ သည် Plam Olein Oil မပါဝင်ဘဲ ကလေးများအတွက် အလွန်ကောင်းမွန်သည့် ကယ်လ်ဆီယမ်စုပ်ယူမှုနှင့် အရိုးဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် များစွာထောက်ပံ့ပေးပါသည်။
Similac Gain IQ တွင် 2’FL HMO & Nucleotides ပါဝင်ပြီး ခုခံအားကျဆင်းမှုကို အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ ထူးခြားပြီး ဦးနှောက်နှင့် မျက်လုံးအတွက် အကျိူးပြုသည့် Lutein, DHA & RRR Natural Vitamin E ပါဝင်ပြီး၊ အရိုးနှင့် သွားများကို သန်စွမ်းကြီးထွားစေသည့် ပရိုတင်း၊ ကယ်လ်ဆီယမ်၊ ဗီတာမင်ကေ နှင့် ဒီတို့ ပါဝင်ပါသည်။
ကလေးတစ်ယောက်၏ ဖော်မြူလာ တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ မည်သို့ပြောင်းရမည်နည်း?
Similac Gain IQ ၏အာဟာရဆိုင်ရာ အချက်အလက်ဆိုတာ ဘာလဲ?
Similac Gain IQ ကို ဘယ်မှာဝယ်လို့ရနိုင်သလဲ?
Similac Gain IQ ကို ကုန်စုံဆိုင်များ၊ ဆေးဆိုင်များ၊ ဈေးဝယ်စင်တာများနှင့် Convenience Store များမှာ လွယ်ကူစွာဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
Similac ၏ထုတ်ကုန်များအကြောင်း ပိုမိုသိရှိလိုပါက မည်သည့်နေရာသို့ဆက်သွယ်ရမည်နည်း?
သင်သည် သင့်ကလေး၏ကြီးထွားမှုအတွက် အာဟာရဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်အချို့ကို ရှာဖွေနေသည်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များအကြောင်းကို ပိုမိုသိရှိလိုပါက Abbott Nutrition Careline ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်သည့် (+၉၅-၉-၂၆၀-၃၅၆ ၂၆၂) ကို တနင်္လာနေ့မှ စနေနေ့ မနက်(၈ နာရီမှ ညနေ ၅:၃၀) အတွင်းဆက်သွယ်၍ စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Similac Total Comfort Stage 3ကဘယ်အသက်အရွယ်တွေသောက်လို့ရမလဲပြောပြပေးပါ?
မင်္ဂလာပါ xxx၊ Similac Total Comfort Stage3ကို အသက် (၂) နှစ်နှင့် (၂) နှစ်အထက်ကလေးများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် မိမိကလေးအား အသက် (၂) နှစ်မှ စပြီး တိုက်ကျွေးနိုင်ပါတယ်ရှင့်။
Similac Total Comfort တိုက်ကျွေးနိုင်တဲ့ အညွှန်းကိုပြောပြပါ။ (သို့) ဘယ်လိုတိုက်ကျွေးရမလဲ။ (သို့) တိုက်ကျွေးနိုင်တဲ့ အဆင့်ဘယ်နှစ်ဆင့်ရှိလဲ?
မင်္ဂလာပါ xxx၊ တိုက်ကျွေးရမယ့်အညွှန်း (သို့) တိုက်ကျွေးရမယ့် အမျိုးအစား (၃) မျိုးရှိပါတယ်ရှင့်။
၁။ မွေးကင်းစ ကလေးငယ်များအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဖော်စပ်ထားတဲ့ Similac Total Comfort Stage 1 ကို မွေးစမှ၁၂ လအထိတိုက်ကျွေးနိုင်ပါတယ်။
၂။ Similac Total Comfort Stage2ကို ကလေးအသက် ၁ နှစ်ကနေ ၂ နှစ် (၁၂ လ မှ ၂၄ လ) အတွင်း တိုက်ကျွေးနိုင်ပါတယ်။
၃။ Similac Total Comfort Stage3နို့မှုန့်ကိုကလေးအသက် ၂ နှစ် နှင့် ၂ နှစ်အထက်ကလေးများအား တိုက်ကျွေးနိုင်ပါတယ်ရှင့်။
Similac Total Comfortကဘယ်လိုကလေးတွေသောက်သူံးသင့်သလဲ?
မင်္ဂလာပါ xxx၊ အသက် ၂နှစ်နှင့် အထက် ကလေးများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Similac Total Comfort Growing-Up Milk ဖော်စပ်စာသည် လက်တို့စ် နို့သကြားနှင့် ဓာတ်မတည့်ခြင်းကြောင့် ၀မ်းချူပ်ခြင်း၊လေပွလေထခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျောခြင်း၊ မအီမသာဖြစ်ပြီး ငိုယိုခြင်း အစရှိသည့် ဝမ်းဗိုက် ပြဿနာများကို ခံစားနေရသော ကလေးများအတွက် ထုတ်လုပ်ထားသော အစာကြေညက်ပြီး အာဟာရစုပ်ယူမှုလွယ်စေသည့် ဖော်မြူလာဖြစ်ပါသည်။
Similac Total Comfort မှာဘယ်နှစ်မျိုးထုတ်လုပ်ထားပါသလဲ?
မင်္ဂလာပါ xxx၊ အသက် ၂နှစ်နှင့် အထက် ကလေးများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Similac Total Comfort Growing-Upt ဖော်စပ်စာသည် လက်တို့စ် နို့သကြားနှင့် ဓာတ်မတည့်ခြင်းကြောင့် လေပွလေထခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျောခြင်း၊ မအီမသာဖြစ်ပြီး ငိုယိုခြင်း အစရှိသည့် ဝမ်းဗိုက် ပြဿနာများကို ခံစားနေရသော ကလေးများအတွက် ထုတ်လုပ်ထားသော အစာကြေညက်ပြီး အာဟာရစုပ်ယူမှုလွယ်စေသည့် ဖော်မြူလာဖြစ်ပါသည်။
Similac Total Comfort တွင်ပါဝင်သော အာဟာရဓာတ်များမှာ –
TummiCare စနစ်တွင် ပရီဘိုင်အိုတစ် (အက်ဖ်အိုအက်စ်)၊ တစ်ပိုင်းတစ်စဖြိုခွဲထား‌သော ၁၀၀ရာခိုင်နှုန်း နို့ဓမ်းရည်မှ ရသော ပရိုတင်း၊ လက်တို့စ် (ပါဝင်မှု အလွန်နည်းပါးသော)၊ စားအုံးဆီ မပါဝင်သော ဟင်းသီးဟင်းရွက်အရောအနှောတို့ ပါဝင်ပါတယ်။ (1,2)
နှစ်ထပ်ကွမ်းအက်ဖ်အယ်လ် အိတ်ချ်အမ်အို နှင့် နယူကလီရိုတိုက်(ဒ်)တို့သည် ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။(3) ၎င်းတွင် ကလေး၏ဖွံဖြိုးဆဲဖြစ်သော ကိုယ်ခံအားစနစ်အားကူညီထောက်ပံ့ရန် ဗီတာမင် အေ၊ဘီ၁၂၊စီ၊ဒီ၊ဖောလစ်အက်ဆစ်၊ သံဓာတ်၊ဆီလီနီယမ်နှင့် ဇင့်တို့လည်း ပါဝင်ပါတယ်။
ဒီအိတ်ချ်အေ၊ လူတင်းနှင့် သဘာဝဗီတာမင်အီးတို့ ပေါင်းစပ်မှုက ဦးနှောက်နှင့် အမြင်အာရုံဖွံဖြိုးမှုအတွက် ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ (4)
ဦးနှောက်ဖွံဖြိုးမှုကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည့် အာဟာရဓာတ် ၁၀မျိုးဖြစ်သော ဒီအိတ်ချ်အေ၊ အေအေ၊ အိုမီဂါ၃နှင့် ၆၊တော်ရင်း၊ ကိုလင်း၊သံဓာတ်၊ ဇင့် နှင့် ဗီတာမင်ဘီ၊ဘီ၁၂ တို့လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ (5)
ပရိုတင်း၊ ကယ်လ်ဆီယမ်၊ ဗီတာမင် ကေနှင့် ဒီတို့သည် အရိုးနှင့် သွားများကိုထောက်ပံ့ပေးပြီး ကြီးထွားဖွံဖြိုးရန် အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
စားအုံးဆီမပါဝင်သော ဖော်စပ်စာသည် အာဟာရဓာတ်များကို စုပ်ယူမှုပိုကောင်းစေပြီး ဝမ်းကိုလည်းမှန်စေပါသည်။ (6,7)
Reference : 1. Borschel et al. (2012); 2. Borschel et al. (2014); 3.Buck R et al. 2004, Schaller et al 2004, 4.^Auestad,Halter et al.2001, Auestad,Scott et al.2003, 5. Based on parental responses inaconsumer perception study conducted among 300 Filipino mothers with children 36months older, 6.Lasekan et al. (2017); 7. de Souza et al. (2017);
Similac Total Comfort ကိုဖျော်စပ်ပုံကိုသေချာလေးရှင်းပြပေးပါရှင့်?
မင်္ဂလာပါ xxx၊ မိမိကလေးကို တိုက်ကျွေးဖို့ မပြုလုပ်မီ လက်ကို စင်ကြယ်အောင်ဆေးကြောပါ။ Similac Total Comfort Growing Up Milk တစ်ခွက်ရရှိရန် နို့မှုန့် ၃ ဇွန်းကို ရေကျက်အေး ၁၈၀ မီလီလီတာနှင့်ရောပါ။ နို့မှုန့်ကို ရေကျက်အေးထဲတွင် လုံးဝပျော်ဝင်နေအောင် ပြုလုပ်ပေးပါ။ Similac Total Comfort ကို တစ်နေ့လျှင် ၃ ကြိမ် တိုက်ကျွေးနိုင်ပါတယ်ရှင့်။
မင်္ဂလာပါ၊ xxx Similac Total Comfort ကို ရန်ကုန်မြို့နှင့် မန္တလေးမြို့တွင်းရှိ စတိုးဆိုင်များ၊ ဆေးဆိုင်များ၊ ဈေးဝယ်စင်တာများနှင့် ကုန်စုံဆိုင်များတွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်ရှင့်။
Call Center Phone No လေးသိချင်ပါတယ်?
မင်္ဂလာပါ၊ xxx Similac Total Comfort နှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို ပိုမိုသိရှိလိုပါက အပတ်စဉ် တနင်္လာနေ့မှ စနေနေ့ထိ မနက် (၈) နာရီမှ ညနေ (၅) နာရီခွဲအတွင်း Abbott Nutrition Careline ဖြစ်တဲ့ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၂၆၀၃၅၆၂၆၂ သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင့်။
မင်္ဂလာပါ xxx Similac Total Comfort ကို တစ်နေ့လျှင် (၃) ကြိမ် တိုက်ကျွေးနိုင်ပါတယ်ရှင့်။ သင့်ကလေးအတွက်အာဟာရနှင့်ပတ်သက်သော နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကို သိရှီလိုပါက ကလေးဆရာ၀န်နှင့်တိုင်ပင်ပြီးလိုအပ်သည့်အကြံဉာဏ်ရယူပါ။
Smilac Total Comfort ကဘာမိတ်လဲရှင့်?
မင်္ဂလာပါ xxx၊ လက်ရှိရောင်းချနေသော Similac Total Comfort ကို စပိန်နိုင်ငံ၊ Granada တွင် ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်ရှင့်။
Similac Total Comfort ရဲ့ဈေးနှုန်းလေးတွေသိချင်ပါတယ်?
Hello xxx, The prices of the Similac Total Comfort Stage3is
Similac Total Comfort Stae3850 g – 47,500 Kyats
Similac Gain IQ HMO liquid ရဲ့ဈေးနှုန်းလေးတွေသိချင်ပါတယ်?
Hello xxx, The prices of the Similac Gain IQ HMO liquid is
Similac Gain IQ HMO liquid – 1,600 Kyats
Similac Step3နဲ့ Step4ရဲ့ဈေးနှုန်းလေးတွေသိချင်ပါတယ်?
Hello xxx, The prices of the Similac Gain IQ and Similac Gain IQ Kid are
Similac Gain IQ (Stage 3) 400 g – 21200 Kyats
Similac Gain IQ (Stage 3) 850 g – 44300 Kyats
Similac Gain IQ Kid (Stage 4) 400 g – 18000 Kyats
Similac Gain IQ Kid (Stage 4) 850 g – 39000 Kyats.
Similac Mum တစ်ဘူးကို ဘယ်လောက်ပေးရပါသလဲ?
Hello xxx, Prices for Similac Mum are,
Similac Mum 400 g – 16500 Kyats
Similac Mum 900g -36300 Kyats
မင်္ဂလာပါ xxx၊ Similac တွင် ပဲပိစပ်ပါဝင်ပါတယ်။ ပဲပိစပ်သည် G6PD အတွက်ရှောင်ရမယ့် အစားအစာစာရင်းတွင် မပါဝင်ပါသော်လည်း သင်ရဲ့ဆရာဝန်ရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုရယူရန် အကြံပြုလိုပါတယ်ရှင့်။
Online ကနေမှာချင်တယ်ဆို ဘယ်မှာသွားမှာရမလဲရှင့်?
မင်္ဂလာပါ xxx၊ သင်အွန်လိုင်းမှ ဝယ်လိုလျှင်အောက်ဖော်ပြပါ စတိုးဆိုင်များသည် Similac Total Comfort ဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသောစတိုးဆိုင်များ ဖြစ်ကြပါတယ်။
၁။ City Mall Online